Nin ra'iisulwasaare iska dhigay oo 18 daqiiqo la sheekaystay wasiir arrimo dibadeed - BBC News Somali
Ninkaas ayaa la sheegay in uu yahay majaajilayste dadka ka qosliya.
Waxaa ka muuqata in wasiirka ay xiiso galisay markii ninka soo wacay uu u sheegay in Putin "uu saamayn ku leeyahay" Jeremy Corbyn oo ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Shaqaalaha.
Xog laga helay dublamaasi sare oo reer UK ah ayaa lagu sheegay "in arrintan ay u muuqato iskudaygii u dambeeyay ee Ruushku uu ku doonayo in uu ku badbaadiyo wajigiisa ka dib markii si caalami ah loogu ceebeeyay weerarkii Skripal oo ahaa jaajuus hore".
Dawladda Britain ayaa sheegtay "in baaritaan lagu samayn doono" sida ay u suuragashay in qofka taleefanka soo diray loogu gudbiyo wasiirka arrimaha dibadda.
"Ma ahayn in arrintaasi dhacdo. Baaritaan ayaa socda, si loo ogaado waxyaabaha la xiriira taleefanka, loona xaqiijin lahaa in aysan mardambe dhicin arrintaas oo kale", ayay tiri haweenay u hadashay xafiiska ra'iisulwasaaraha Britain ee NO 10.
Dunida oo ku gacan saydhay dalab Ruushka ka yimid
Ruushka: Galbeedku wuxuu isku dayayaa inuu naga hor istaago Koobka Aduunka
Graham Phillips oo ah saxafi Britain u dhashay oo Ruushka taageera ayaa barta YouTube soo dhigay codkan oo 18 daqiiqo ah, sida ay ku warrantay qaybta warqabadka ee BBC.
Xuquuqda lahaanshahana waxaa la siiyay Vladimir "Vovan" Kuznetsov iyo Alexei "Lexus" oo ah labo ruux oo caan ku ah shactirada siyaasadda, waxaana daneeya warbaahinta rasmiga ah ee Ruushka.